Absinthe, dandelion, soursop, hemp: osisi ndị a na - egbu ọrịa cancer - Afrikhepri Fondation
min gụọ 13 min
L 'Ejirila Absinthe (artemisia annua L) kemgbe ọtụtụ puku afọ na-agwọ ọrịa ịba, ndị nchọpụta achọpụtawokwa na ọ nwere ike ibibi mkpụrụ ndụ kansa 98% na ngụgụ.
A na-ewere osisi ọ bụla dị ka ihe na-emerụ ọ gwụla ma achọtara ya ka ọ baara anyị uru. Ka anyị were ihe atụAbsinthe, a na-enye ikike inye osisi a, nke a na-eme ka ọ drinkụ mmiri, ka amachibidoro ya ruo ọtụtụ afọ, na-enyo enyo n'ụzọ ziri ezi nke ịwakpo ebe a na-ama jijiji nke ndị merụrụ ya.
Ọ bụ na 19Eme na narị afọ, ihe ọṅụṅụ kachasị mma nke ndị na-ese ihe, na nke Van Gogh à Verlaine, na-agafe Emile Zola, bụ onye kọwapụtara ọdachi ndị ọ ma ama " Assommoir Ha ekwenyegh i iji ya mebie ya, e chekwara ya ogologo oge thujone, otu n’ime irighiri ihe dị n’ime ya, nwere ike ibute ara.
Mana taa, nyocha egosila na ọ bụghị, ọ na-enwekwa ihe ịga nke ọma taa. njikọ
Mana 'Absinthe zoro ihe ndị ọzọ, gụnyere nke ịgwọ ọrịa cancer.
Ihe niile ga-esi n'ili e nwetara na Mawangduina China, ka ọwụwa anyanwụ nke Changsha na Hunan, saịtị na-enyocha 1972, ma nwee, n'etiti ihe ndị ọzọ, ihe odide ederede nke metụtara ọgwụ na nkà mmụta ọgwụ Chinese na karịsịa ọgwụ ọgwụ. njikọ
Ihe odide ndị a sitere na 168 tupu oge anyi a napugara ngwongwo nkeartémisinine, ewepụtara kemịkalụ kemịkalụ naabsinthe. njikọ
Na nso ụlọ, ndị nyocha si Mahadum nke Washington Narendra P.Singh et Henry C. Lai, bipụtara otu nnyocha nke gosipụtara nke ahụ artemisinin nwere ike ịgwọ ọrịa cancer nke ọma. njikọ
Ọbụna ma ọ bụrụ na arụrịta ụka ahụ, egwu ahụ ka na-adọrọ mmasị. njikọ
Mgbe ahụ, ọtụtụ osisi ọgwụ ndị ọzọ ga-enwekwa ikike iji gwọọ kansa: nke Dandelion dịka ọmụmaatụ ...
Dika ihe omumu emere site na Mahadum Windsor au Canada, mgbọrọgwụ nke Dandelion ga-adị irè karịa chemotherapy.
Mmetụta cytotoxic nke mgbatị mgbọrọgwụ Dandelion nwere ike igbu 96% mkpụrụ ndụ nke arịa ọrịa leukemia na-adịghị ala ala (ụdị ọbara cancer) 48 awa ọ bụ nanị mgbe ịmịsịrị.
Ihe nchọpụtara nke ihe osisi a dị ka ihe ọhụụ: dọkịta ahụ Caroline Hamm, onye ọkachamara n'ọrịa kansa, chọpụtara na otu onye n'ime ndị ọrịa ya na-a teaụ tii dandelion tii n'ụlọ nchere, yana ahụike ya na-akawanye mma…
O mepere onye na-ahụ maka mmiri, Siyaram Pandey, prọfesọ na Mahadum nke Windsor au Canadaonye malitere nnyocha, nyere ụmụ akwụkwọ ya aka.
O mere ule na ọbara nke ndị ọrịa dị iche iche mechara chọpụta: " mgbọrọgwụ wepụ mkpụrụ ndụ dị oke ahọpụtara. Egbughị mkpụrụ ndụ ahụike, ebe mkpụrụ ndụ cancer ee ee ". njikọ
Nwee obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe okwu a pụtara " na-aṅụ ihe ndị dị na mgbọrọgwụ »...njikọ
Ka anyị hapụ ya Dandelion maka osisi ọzọ nke kpalitere esemokwu ọtụtụ afọ: nke hemp.
Na nsogbu niile, nke hempYa, kwa, nwere ike ịlụ ọgụ cancer n'ụzọ dị irè.
N'ezie, ọ bụrụ na anyị ga-ekwere na National Cancer Institute nke US, na cannabinoids nke afọ nyere aka kpochapụ kansa site na igbu mkpụrụ ndụ ndị mebiri emebi, yana ị na - echekwa sel dị mma. njikọ
A maaralarị na cannabinoids nwere ike "bara uru" n'enye aka, n'etiti ihe ndị ọzọ, ndị ọrịa iji nagide ihe mgbu, ma kpalie agụụ ha, ma site na nchọta a, e nwere ezuru iji nye ndị na-arịọ ya ajụjụ ọhụrụ. n'ihi na ogologo oge decriminalization nke cannabis.
Ka anyị hapụ ya hemp maka osisiAmazon, na Graviola.
Nnyocha nchọpụta na-egosi na mkpụrụ osisi a, nke a na-akpọ Guanabana(soursop) nwere ike ịlụ ọgụ megide ọrịa kansa na-agwọ ọrịa kpamkpam nke na-adịghị akpata ọgbụgbọ, ọnwụ ma ọ bụ ntutu isi, mgbe ọ na-echebe usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
si 1976, na Guanabana egosiputaputara na odi nnabata nke oma na otutu ulo nyocha.
Ọmụmụ ihe e bipụtara na akwukwo nke ihe ndi di iche iche Kwuru na mkpụrụ osisi a nwere ike ịhọrọ mkpụrụ ndụ cancer cancer nke nwere ike karịa 10 000 ọgwụ chemotherapy. njikọ
Ozi ndị ọzọ na nke a njikọ.
Ọbụna akwụkwọ nke osisi Graviola nwere ike ịrụ ọrụ megide ọrịa kansa, ọ ga-adịkwa irè karịsịa megide colon, ara, prostate, ọkụ na pancreatic cancers. njikọ
Iji zuru ezu, anyị kwesịrị ikwu banyere osisi ndị ọzọ a ma ama maka ihe ha na - egbochi ọrịa kansa, dịka Black nightshade, na Anụ ọhịa (Cichorium intybus), na Sarsaparilla Glabra, nchoputa nke ndi sayensi siMahadum Florida, na Ụlọ ọrụ Western Reserve University, Ma Mahadum King Georgena India. njikọ
Ma nke ahụ abụghị ihe niile: nyocha site na Ratna Ray, Professor Professor of Pathology, na-eso ya otu nke Mahadum nke Saint Louis, gosipụtara ezigbo ọrụ nke wepụ nke Melon Amer, nke na-ebelata uto nke mkpụrụ ndụ cancer, na-egbochi uto nke ndị ara ara na ọrịa prostate. njikọ
Na-ekele mgbe niile na ihe ọṅụṅụ nke Bitter melon, ọmụmụ site n'akaMahadum nke Colorado, egosila na ọ ga-amachi ike nke mkpụrụ ndụ kansa a na-eme ka ọriaze glucose, si otú ahụ belata ike mkpụrụ ndụ ma si otú ahụ bibie ya.
Otu nwere ike igbakwunye na ogologo ndepụta nke osisi ọgwụ na-egbochi cancer, la Green chirette, na alfalfa, nkeanis, na na-esi ísì ụtọ nymphaeum, nkeArjuna, Ashwagandha, le Ngwurugwu a gọziri agọzi, ojii cohosh, nkeaigremoine, na celandine, osisi a ma ama nke na-agwọkwa nkịrịka site n'itinye ihe odo odo na ihe ndị a, le Nerprun purgative, na Clajeux, na Boswellia serrata, na Cordyceps, na Chimaphila Umbellata, na Phytolacca americana, nabutterbur, na Lapacho, na Nchikota, dịgasị iche iche Ginseng Brazil, na acha odo odo, onye nkpuchi nke nso, nke Ndabere na-aga n'ihu, (osisi na-edozi ahụ) le Serenoa repens, naPolypodium decumanum, la valerian, willow ọcha, tarragon, Pastel nke dyers, nkeKinky sọrel, na zédoaire, (ọtụtụ turmeric) la Dionée ofufe catcher,(osisi ozo nke ozo) na espinheira Santa, na Mullaca, na Mutamba...
Ka anyị jiri osisi ole na ole ndị ọzọ ga-aba uru maka ịrịa cancer, dị ka le turmeric, nkeGoldenseal, na mmiri ara ehi thistle, naechinacea, Ginger, na Gotu Kola, na burdock, TheYarrow, na rosemary. njikọ
Ma anyị agaghị ebu ụzọ lụọ ọgụ dị elu, iji zere iketa ọrịa a dị egwu, na-akpata afọ ọ bụla maka ọnwụ nke Ndị mmadụ 150 000 en France ? njikọ
Anyị amaolarị na mmetọ ahụ redio na-egbuke egbuke bụ ụdị ọrịa cancer, ọrịa leukemia, (njikọ) ma anyị maara na ọ bụ na ndị na-emebi ihe anyị bụ ndị nwere nsogbu nke nwere ike ịkpata allergies, ọbụna ọrịa cancer.
N'ezie, ọ bụrụ na anyị ga-ekwere nyocha ahụ " Ndị na-azụ ahịa 60 », Ụdị ụfọdụ nwere carcinogenic na ọgwụ ndị na-egbu egbu maka imeju.
12 akwa ákwàna Anwale 14, achọpụtala na ikpe mara gị na iji kemịkal dị ize ndụ, ọ bụrụ na ha ekwe nkwa na t-shirts na-enweghị ntụpọ ahụ Rhodamine B "Nke ahụ ha nwere ka ekwere na ọ bụ" ikekwe na-emetụ ya n'ahụ ".
naanị 2 ụdị, Ecover et Rainett, nweta ihu ọma nke ndị na-agba akaebe nke magazin a. njikọ
Ọ bụ ihe nwute, ọ bụghị sọsọ ụfọdụ dị njọ, ka otu akwụkwọ ahụ siri kwuo, enwere ọtụtụ Ngwa 100 nke ndụ kwa ụbọchị nke dị ize ndụ.
Nri, ihe ịchọ mma, ihe ndị a na-egbu egbu, ndị nyochara nyocha, enyeghị nsonaazụ na-agba ume. njikọ
Backlaghachi na nuklia, dị ka enwere ike ịme na-enweghị ihe nhicha na ngwaahịa ndị ọzọ dị ize ndụ, ọ na-esikwu ike iji zere mmetọ ikuku.
Anyị maara taa na Fukushima gafereosimiri, a na-ahụ ya n'ụsọ oké osimiri America, mana a na-ahụ ya ugbu a na mmiri pọmpụ nke ndị na-eri Tokyo : atụlere mmụba nke ịṅụ mmiri mmiri 24%. njikọ
Dị ka enyi m ochie Africa si kwuo, " ọ dị mfe igbochi ọrịa karịa ịnwa ịgwọ ya ".
Pa osisi olive
Mkpokọta mkpụrụ osisi Graviola 120 x 2000mg vegan mkpụrụ 4: 1, ngwaahịa dị mma sitere na MoriVeda (1x120 Tabs)
15,40€ dị na ngwaahịa
1 dị ọhụrụ site na 15,40 €
Zụta € 15,40
nke September 18, 2020 11:25 pm
Graviola bụ osisi pụrụ iche sitere na mpaghara Amazon nke South America na onyinye pụrụ iche sitere na okike.
Ihe dị ka mita ise ruo isii n’ogologo, o nwere ọtụtụ ihe ọma, nke mama Nature nyere anyị.
Ndị obodo ahụ na-ewere mkpụrụ osisi ahụ dị ka ihe ọ drinkụreshingụ na-enye ume ọhụrụ ma ejiri ya mee ihe maka ọgwụgwọ ọdịnala
Mmata bioavailability dị elu na mwepụta nke enzymes site na ịgwakọta asịrị na nnabata ozugbo site na akpụkpọ ahụ mucous.
Graviola mgbe niile ọ bụ ihe dị na mbụ sitere na Peru. Mụtakwuo maka ngwaahịa ahụ na nkọwa dị n'okpuru.
Nleta ahụ: njem ọzọ dị egwu - Akwụkwọ nyocha (2015)
Kachasị zoro ezo n’ụwa (Video)